ooVimba beMonero-Funda ukuRhweba
Ixabiso leMonero (XMR): Ipatheni yeTshati ephindwe kabini kwiNqanaba le-179 yeedola, iBullish Movement ecetywayo.
Uqikelelo loNyaka lweNgqekembe yeMonero (2022)
Kwimeko apho inqanaba lenkxaso ye-$ 179 ibamba, iinkunzi zenkomo zingathatha imarike kwaye ixabiso liya kunyuka ukuya kumanqanaba okumelana ne-$ 220, i-$ 249 kunye ne-$ 281. Xa iibhere ziphula inqanaba lenkxaso ye-179 yeedola, kunokubakho ukuncipha kwinqanaba lenkxaso ye-161 kunye ne-136 yeedola.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 220, $ 249, $ 281
Amanqanaba enkxaso: $ 179, $ 161, $ 136
I-Monero i-bearish kwitshathi yeveki. Kunyaka ophelileyo, i-bullish trend yaqala ngenkunzi ngoJanuwari 04 kwi-136 yenkxaso yezinga lenkxaso. Uxinzelelo lweenkunzi zenkomo luqhawule amanqanaba okumelana ne-$ 161 kunye ne-$ 179 kwaye ibeke ixabiso kwi-$ 511 kwinqanaba eliphakamileyo lonyaka. Abathengisi baphazamise ukunyuka kwexabiso kunye nokuqulunqwa kwamakhandlela e-bearish engulfing. Ukuhla kwexabiso ukuvavanya umgangatho wenkxaso ye-179 yeedola. Inqanaba elisanda kukhankanywa lenzeka ukuba lisezantsi enyakeni.
Itshathi yeveki yeXMRUSD, nge-16 kaJanuwari
Ixabiso le-Monero lithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lwe-bearish momentum. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso ye-$ 179 ibamba, iinkunzi zenkomo zingathatha imarike kwaye ixabiso liya kunyuka ukuya kumanqanaba okumelana ne-$ 220, i-$ 249 kunye ne-$ 281. Xa iibhere ziphula inqanaba lenkxaso ye-179 yeedola, kunokubakho ukuncipha kwinqanaba lenkxaso ye-161 kunye ne-136 yeedola. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla e-14 likumanqanaba angama-50 kunye nomgca wesignali obonisa i-bullish direction.
I-Monero ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yemihla ngemihla. Isenzo sexabiso kwitshathi yemihla ngemihla yenze iphethini yetshathi ephantsi kabini. Ixabiso lokuqala livavanya inqanaba lenkxaso kwi-$ 179 nguDisemba 15. Ixabiso lanyuka ngenxa yokuba uxinzelelo lwe-bearish alukwazanga ukulichitha. Ivavanye inqanaba lokumelana ne-249 yeedola. Iibhere zichasile ukunyuka kwexabiso kwaye zityhale ixabiso lokuphinda lihlawule eliphantsi langaphambili kwi-$ 179 ngoJanuwari 08. Iinkunzi zeenkomo zingathatha imarike.
XMRUSD Itshathi yosuku, nge-16 kaJanuwari
Ixabiso lirhweba ngaphezu kwe-EMA ye-9 kunye ne-EMA ye-21-day ebonisa ukuguqulwa kwe-bullish kwinqanaba le-$ 179. Isalathiso samandla esinxulumeneyo sikumanqanaba angama-40 abhekiselele ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa olunokuba yi-pullback.
tags Marketing, Monero, Uhlalutyo Technical
Ixabiso leMonero (XMR) lisondela kwiNdawo ePhantsi kwi-179 yeedola, iBullish Movement ecetywayo
IMonero (XMR) Uhlalutyo lwexabiso: NgoJanuwari 09
Kwimeko apho iinkunzi zenkomo zichasa ukuhamba kwe-bearish kwi-179 yeedola, ixabiso linokuthi lihlehlise kwaye libhekane nenqanaba lokumelana ne-$ 220, elinokunyusa ixabiso kwi-$ 249 kunye ne-$ 281. Xa iibhere ziphula inqanaba lenkxaso ye-179 yeedola, kunokubakho ukuncipha kwinqanaba lenkxaso ye-161 kunye ne-136 yeedola.
I-Monero i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. I-build trend yaqala ngenkunzi yenkomo ngoDisemba 20 kwi-179 yenkxaso yezinga lenkxaso ibeka ixabiso kwi-249 yezinga. Uxinzelelo lweenkunzi zenkomo aluphumelelanga kwaye alukwazanga ukuqhawula umgangatho wokumelana. Ipatheni yekhandlela yebha yangaphakathi yenziwe kunye nokuhla kwexabiso ukuvavanya i-low yangaphambili emva kokuqhawula inqanaba le-$ 220. Ixabiso livavanya inqanaba le-179 yeedola okwangoku kwaye iinkunzi zenkomo zilawula imarike namhlanje ezinokunyusa ixabiso.
XMRUSD itshathi yemihla ngemihla, nge-09 kaJanuwari
Ixabiso le-Monero lithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lwe-bearish momentum. Kwimeko apho iinkunzi zenkomo zichasa ukuhamba kwe-bearish kwi-179 yeedola, ixabiso linokuthi lihlehlise kwaye libhekane nenqanaba lokumelana ne-$ 220, elinokunyusa ixabiso kwi-$ 249 kunye ne-$ 281. Xa iibhere ziphula inqanaba lenkxaso ye-179 yeedola, kunokubakho ukuncipha kwinqanaba lenkxaso ye-161 kunye ne-136 yeedola. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla e-14 likumanqanaba angama-40 kunye nomgca wesignali obonisa i-bullish direction.
I-Monero ikwintshukumo ye-bearish kwitshathi ye-4-Hour. Isenzo sexabiso kwitshathi yeeyure ze-4 sizama ukwenza iphethini yetshathi ephantsi kabini. Ixabiso livavanye inqanaba lenkxaso kwi-179 ye-$ 15 kaDisemba. Iibhere zichasile ukunyuka kwexabiso kwaye zilityhalele ezantsi ixabiso ukuya kwinqanaba elisezantsi kwi-249 yeedola. Kubonakala ngathi iinkunzi zilungiselela ukuthatha imarike.
Itshathi ye-XMRUSD yeeyure ezi-4, nge-09 kaJanuwari
Ixabiso lirhweba phakathi kwe-EMA ye-9 kunye ne-EMA ye-21-day enokuthi ibonise ukuguqulwa kwe-bullish kwizinga le-179 yeedola. Isalathiso samandla esinxulumeneyo sikumanqanaba angama-40 abhekiselele phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga.
Ixabiso leMonero (XMR): Ngubani oyaKuphumelela kweli dabi leXabiso?
Uhlalutyo lwamaxabiso eMonero (XMR): Okthobha 31
Xa kukho ukuqhawuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 279, iinkunzi zenkomo ziya kutyhala ingqekembe ukuya kwinqanaba lexabiso le-$ 279 kwaye inokwandisa kwi-361 yezinga lokumelana kuphela ukuba i-$ 322 ingene. Ngakolunye uhlangothi, ukuchithwa kwenqanaba lenkxaso ye-$ 244 kuya kunciphisa ixabiso kwi-$ 216 kunye namanqanaba e-$ 189.
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-XMRUSD ikwintshukumo ejikelezayo. Iinkunzi zeenkomo zazizama ukuqhekeza inqanaba lokumelana ne-$ 281 kodwa iibhere ziyayichasa intshukumo. Iibhere zazicinezela ngokulinganayo kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 244, iinkunzi zeenkomo zikhusela izinga. Ixabiso libangele ukunyakaza okuhamba ngaphakathi kwe-$ 281 kwinqanaba lokumelana kunye nenqanaba lenkxaso ye-$ 244. Imfazwe phakathi kweenkunzi zenkomo kunye neebhere inokuqhubeka de kubekho ukugqabhuka.
Itshathi yemihla ngemihla yeXMRUSD, Okthobha 31
Ii-EMA ezimbini zivaliwe kwaye i-Monero ithengisa malunga ne-9-day EMA kunye ne-21-day EMA kwitshathi yemihla ngemihla. Xa kukho ukuqhawuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 279, iinkunzi zenkomo ziya kutyhala ingqekembe ukuya kwinqanaba lexabiso le-$ 279 kwaye inokwandisa kwi-361 yezinga lokumelana kuphela ukuba i-$ 322 ingene. Ngakolunye uhlangothi, ukuchithwa kwenqanaba lenkxaso ye-$ 244 kuya kunciphisa ixabiso kwi-$ 216 kunye namanqanaba e-$ 189.
I-Monero isukela kwitshathi yeeyure ezi-4. Inqanaba lenkxaso ye-$ 244 yavavanywa ngo-Oktobha 20. Iinkunzi zeenkomo zichasa ukuhla okuthe kratya kwixabiso kunye nekhandlela elikhulu le-bullish livela elityhalela ixabiso kwizinga lokumelana ne-$ 281. Ukonyuka kwesantya senkunzi yenkomo kunokulityhala ixabiso ukuya kwizinga lexabiso le-$322. Ixabiso linganyuka ngakumbi.
Itshathi yeXMRUSD yeeyure ezi-4, Okthobha 31
I-Monero irhweba ngaphezu kwee-EMA ezimbini, nto leyo ebonisa ukuba ukunyuka kwenkunzi yenkomo kuyanda. Isalathiso samandla esihambelanayo sikumanqanaba angama-60 kunye nomgca wesignali obonisa i-bullish direction.
Ixabiso leMonero (XMR) Lizabalazela ukungena kwiNqanaba lokuchasa i-$ 281
Ukuhlaziywa: 24 October 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eMonero (XMR): Okthobha 24
Ukuqhawula kwinqanaba lokumelana ne-$ 281 ngeenkunzi zenkomo kuya kutyhala ingqekembe ukuya kwinqanaba lexabiso le-322 ye-$ kwaye inokwandisa kwizinga lokumelana ne-$ 361. Ngakolunye uhlangothi, ukuchithwa kwenqanaba lenkxaso ye-$ 244 kuya kwenza ingqekembe ukuba ifumane inkxaso kwi-$ 216 kunye ne-$ 189 amanqanaba.
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-XMRUSD ikwintshukumo ye-bullish. Kwakukho imfazwe phakathi kweenkunzi zenkomo kunye neebhere kwimarike yeMonero kwiveki ephelileyo. Iinkunzi zeenkomo zazizama ukuphula inqanaba lokumelana ne-$ 281 kodwa iibhere zazixhathisa intshukumo. Iibhere zazicinezela ngokulinganayo kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 244, iinkunzi zeenkomo zikhusela izinga. Uxinzelelo lweeBulls ngoku lulawula imarike ye-Crypto.
XMRUSD itshathi yemihla ngemihla, nge-24 kaOkthobha
I-Monero ithengisa ngaphezu kwe-EMA ye-9 kunye ne-EMA yeentsuku ze-21 kwitshathi yemihla ngemihla. Ukuqhawula kwinqanaba lokumelana ne-$ 281 ngeenkunzi zenkomo kuya kutyhala ingqekembe ukuya kwinqanaba lexabiso le-322 ye-$ kwaye inokwandisa kwizinga lokumelana ne-$ 361. Ngakolunye uhlangothi, ukuchithwa kwenqanaba lenkxaso ye-$ 244 kuya kwenza ingqekembe ukuba ifumane inkxaso kwi-$ 216 kunye ne-$ 189 amanqanaba.
IMonero ikwitshathi yeyure ezi-4. Iibhere zityhala ingqekembe ukuvavanya inqanaba lenkxaso ye-244 yeedola ngo-Oktobha 20. Iinkunzi zeenkomo zithintele ukuhla okuthe kratya kwixabiso kunye nekhandlela elikhulu le-bullish livela elityhalela ixabiso kwizinga lokumelana ne-$ 281. Ukonyuka kwesantya senkunzi yenkomo kunokulityhala ixabiso ukuya kwizinga lexabiso le-$322. Ukunyuka kwamaxabiso okongeziweyo kulindelwe.
Itshathi yeMonero yeyure ezi-4, nge-24 kaOkthobha
Ixabiso le-Monero (XMR): Inqanaba lokumelana ne- $ 281 ibambe, ukunyusa uxinzelelo
Ukuhlaziywa: 17 October 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eMonero (XMR): Okthobha 17
Abathengisi banokutyhala ixabiso liye kwinqanaba lokuxhasa lama-244 eedola apho inokunciphisa iye kuthi ga kwi-189 yeedola ukubonelela ngeedola ezingama-216. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 244 libambe, intshukumo ye-bullish inokuqhubeka iye kuthi ga kwi-281, i-322 yeedola kunye ne-361 yeedola.
Kwitshathi yemihla ngemihla, iXMRUSD ikwiintshukumo ze-bearish. Iinkunzi zeenkomo azikwazanga ukutyhala ingqekembe ngaphezulu kwenqanaba lokumelana ne- $ 281 njengoko bekucingelwe kwiveki ephelileyo. Inqanaba elikhankanyiweyo libambe kwaye i-Crypto yayidibanisa kwinqanaba elikhankanyiweyo ngaphezulu kweentsuku ezintathu. Iibhere zifumana uxinzelelo ngakumbi namhlanje kwaye iyaqhekeka kwindawo yokudityaniswa. Ixabiso ngoku lijongane nenqanaba lenkxaso le- $ 244.
Itshathi yemihla ngemihla yeXMRUSD, Okthobha 17
I-Monero ithengisa ngezantsi kwe-9-day EMA kunye ne-21-day EMA kwitshathi yemihla ngemihla. Abathengisi banokutyhala ixabiso liye kwinqanaba lokuxhasa lama-244 eedola apho inokunciphisa iye kuthi ga kwi-189 yeedola ukubonelela ngeedola ezingama-216. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 244 libambe, intshukumo ye-bullish inokuqhubeka iye kuthi ga kwi-281, i-322 yeedola kunye ne-361 yeedola. Okwangoku, ixesha lesalathiso samandla esi-14 singaphezulu kwamanqanaba angama-30 akhomba ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
I-Monero i-bearish kwi-4-Hour chart. Inqanaba lokumelana ne-281 yeedola ibambe kwaye iinkunzi zenkomo azinakho ukwahlula inqanaba elikhankanyiweyo. Abathengi bazamile ngokwahlukeneyo ukuyaphula kodwa amandla abo akanakumelana nokuchasana ne- $ 281. Abathengisi bafumana uxinzelelo ngakumbi namhlanje kwaye ixabiso liyancipha ngalo mzuzu ukuya kwinqanaba lenkxaso le- $ 244. Ukwehla kokunyuka kwamaxabiso okucingelwayo kwaye inqanaba elikhankanyiweyo linokufikelelwa.
Itshathi yeXMRUSD 4 yeyure, Okthobha 17
I-Monero ithengisa ngaphantsi kwee-EMA ezimbini, ezibonisa ukuba ukunyuka kweebhere kuyanda. Isalathiso samandla esimalunga namaqondo angaphantsi kwamanqanaba angama-50 kunye nomgca wesiginali obonisa isalathiso se-bearish.
Ixabiso le Monero (XMR) lilindele ukuphuka
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Monero (XMR) ngoSeptemba 19
Kwimeko apho iibhere zinokutyhala ingqekembe ukuba idilize inqanaba lama- $ 244, inokuhla iye kumanqanaba enkxaso ye- $ 189 kunye ne- $ 161. Ukuba inqanaba lokumelana ne-281 yeedola liphulwe ngaphezulu, amaxabiso anokunyuka aye kuma-322 eedola nakuma-361 amanqanaba okuxhathisa.
Amanqanaba enkxaso: $ 244, $ 189, $ 161
Kwitshathi yemihla ngemihla, iXMRUSD ikwiintshukumo ze-bearish. UMonero wayephantsi koxinzelelo lwe-bearish kwiveki ephelileyo. Inqanaba lenkxaso leedola ezingama-244 lavavanywa kunye namava okuqhekeka ngokuyinxalenye kodwa iinkunzi zeenkomo zaphikisana nokuqhekeka kwenxalenye kwaye amaxabiso abuyiselwa umva ukuzama inqanaba lokumelana ne- $ 281. Kuyo yonke le veki iphelileyo, ixabiso lixabisa ngaphakathi kwama-281 kunye nama-244 eedola.
Itshathi yemihla ngemihla yeMonero, ngoSeptemba 19
Okwangoku, iibhere zizama ukutyhala ixabiso liye kwinqanaba eliphantsi kwinqanaba leedola ezingama-244. Inqanaba lenkxaso le- $ 244 linokungena njengoko abathengisi benza uxinzelelo kwimarike yeMonero. Ixabiso lithengisa ngaphantsi kwe-EMA yeentsuku ezili-9 kunye ne-EMA yeentsuku ezingama-21 ekunxibelelana ngokusondeleyo kwitshathi yemihla ngemihla. Kwimeko apho iibhere zinokutyhala ingqekembe ukuba idilize inqanaba lama- $ 244, inokuhla iye kumanqanaba enkxaso ye- $ 189 kunye ne- $ 161. Ukuba inqanaba lokumelana ne-281 yeedola liphulwe ngaphezulu, amaxabiso anokunyuka aye kuma-322 eedola nakuma-361 amanqanaba okuxhathisa.
I-Monero kukuhamba okujikelezayo kwitshathi yeeyure ezi-4. UMonero wenyuka kwinqanaba lokumelana ne-322 yeedola ngoSeptemba 07. Amakhandlela aqinileyo e-bearish ayavela kwaye aphule inqanaba lenkxaso le- $ 281. Inqanaba lenkxaso le- $ 244 lavavanywa kwaye langena kodwa iibhere azinakugcina amandla. I-Crypto iqale ukuhamba okuphakathi kwama-281 eedola kunye nama-244 amaxabiso amaxabiso.
Itshathi yeeyure ezingama-4 zeMonero, ngoSeptemba 19
UMonero urhweba ngeenxa zonke ii-EMA ezimbini, ezibonisa ukuba amandla ebhere kunye nenkunzi yeenkomo ziyalingana. Amandla esihlobo akumanqanaba angama-50 kunye nelayini yomqondiso engabonisi lathiso.
Ixabiso le-Monero (XMR): Iibhokhwe zisebenzisa uxinzelelo ukuya kuthi ga kwinqanaba lokumelana ne-322 yeedola
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Monero (XMR) ngoSeptemba 05
Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zityhale ngempumelelo ingqekembe engaphezulu kwe- $ 322 kwinqanaba, inokuveza ixabiso kumaqondo oxhathiso angama- $ 361 kunye ne- $ 401. Ngaphantsi kwexabiso langoku kwinqanaba lokuxhasa lama-281 eedola, ukuhla okungaphezulu kunokushenxisa ixabiso liye kumanqanaba enkxaso ye- $ 244, kunye nexabiso leedola le- $ 189.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 322, $ 361, $ 401
Amanqanaba enkxaso: $ 281, $ 244, $ 189
Kwitshathi yemihla ngemihla, iXMRUSD ikwintshukumo yokunyusa umgangatho. Ingqekembe ibisentshukumo ejikelezayo kwinqanaba lama- $ 322. Ixabiso emva kwexesha lehlile ukuphinda ubuyekeze inqanaba lenkxaso yenqanaba lama- $ 281. Nge-01 kaSeptemba, ikhandlela elixhonyiweyo elivelayo liyavela kwaye ixabiso liyonyuka liye kwinqanaba lokumelana ne- $ 322 okwangoku.
Itshati yemihla ngemihla kaMonero, ngoSeptemba 05
Iinkunzi zizama ukutyhala ixabiso ukophula inqanaba lokumelana ne- $ 322 njengoko abaThengi befaka uxinzelelo kwimarike yeMonero. Ixabiso lithengisa ngaphezulu kwe-9-day EMA kunye ne-21-day EMA kwitshathi yemihla ngemihla. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zityhale ngempumelelo ingqekembe engaphezulu kwe- $ 322 kwinqanaba, inokuveza ixabiso kumaqondo oxhathiso angama- $ 361 kunye ne- $ 401. Ngaphantsi kwexabiso langoku kwinqanaba lokuxhasa le- $ 281, ukwehla okungaphezulu kunokutyhala ixabiso liye kuthi xhaxhe kumanqanaba enkxaso ye- $ 244, kunye nexabiso leedola le- $ 189.
I-Monero iyasebenza kwi-4-Hour chart. NgoSeptemba 01, ixabiso lafumana inkxaso kwinqanaba lama-281. Abathengi basabela ngokuchasene nokwehla kwamaxabiso kunye nokukhula kweenkunzi zenkomo ngokuthe ngcembe kwenyuka kwitshathi yeeyure ezi-4. Ixabiso liya kwinqanaba lokumelana ne- $ 322.
Itshathi yeeyure ezingama-4 zeMonero, ngoSeptemba 05
I-EMA yeentsuku ezili-9 iyahlukana ne-EMA yeentsuku ezingama-21 kwaye ixabiso lirhweba ngaphezu kwee-EMA ezimbini, ezibonisa ukuba ukunyuka kweenkunzi kuyanda. Amandla esihlobo angaphezulu kwamanqanaba angama-60 kunye nomgca wesiginali olatha phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga
Ixabiso le-Monero (XMR) liyaqhubeka nokuHamba ngokuHamba ngaphakathi kwama- $ 244 kunye ne- $ 189 Amanqanaba
Ukuhlaziywa: 11 Julayi 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eMonero (XMR): Julayi 11
Kwimeko apho iinkunzi zenkomo zonyusa umfutho wazo, inqanaba lokumelana ne-244 yeedola linokwaphulwa, elinokunyusa ixabiso liye kuma-281 eedola nakuma-322 amanqanaba okuxhathisa. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo azikwazi ukwahlula inqanaba lokumelana ne- $ 244, amaxabiso anokuhla aye kwinqanaba lokuxhasa lama- $ 189, $ 161 kunye ne- $ 136 amanqanaba.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 244, $ 281, $ 322
Kwitshathi yemihla ngemihla, iMonero isendleleni yokuhamba. Ukuhamba okuqhubekayo kuyaqhubeka kwintengiso yemihla ngemihla. Iibhere zisafumana amandla okwephula inqanaba lenkxaso le- $ 189. Kwakhona, iinkunzi zeenkomo zinengcinezelo esezantsi yokuphula inqanaba lokumelana ne- $ 244. UMonero uqhubeka ngokuhamba kwinqanaba lokumelana ne- $ 244 kunye nenqanaba lenkxaso le- $ 189. Ngaphandle kokuba kukho ukonakala kwenqanaba lenkxaso le- $ 189 okanye ukwahlukana kwe- $ 244, ukudityaniswa kuyaqhubeka.
Itshathi yemihla ngemihla yeXMR, nge-11 kaJulayi
Ixabiso le-Monero lithengisa ngezantsi kwaye ngaphakathi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lokudityaniswa kwentshukumo. Kwimeko apho iinkunzi zenkomo zonyusa umfutho wazo, inqanaba lokumelana ne-244 yeedola linokwaphulwa, elinokunyusa ixabiso liye kuma-281 eedola nakuma-322 amanqanaba okuxhathisa. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo azikwazi ukwahlula inqanaba lokumelana ne- $ 244, amaxabiso anokuhla aye kwinqanaba lokuxhasa lama- $ 189, $ 161 kunye ne- $ 136 amanqanaba.
I-Monero kukuhamba okujikelezayo kwitshathi yeeyure ezi-4. Uxinzelelo lwabathengisi luhlala lubuthathaka kwaye alunakwaphula inqanaba lenkxaso le- $ 189. Ixabiso liboshwe ngaphakathi kwinqanaba lokumelana ne- $ 244 kunye ne- $ 189 kwinqanaba lokuxhasa.
Itshathi yeXMRUSD 4 yeyure, ngoJulayi 11
Ixabiso lijikeleza ngaphezulu kwaye lijikeleze ii-EMA ezimbini nge-EMA yeentsuku ezili-9 zingenelele kwi-EMA yeentsuku ezingama-21 ezibonisa ukuba intshukumo eqhubekayo iyaqhubeka kwimarike yaseMonero. Isalathiso samandla esihambelanayo sikumanqanaba angama-60 angabonisi lukhokelo lwamaxabiso.
Ixabiso le-Monero (XMR) liBanga eliBanzi ngaphakathi kweedola ezingama-244 kunye namaNqanaba angama-189
Uhlalutyo lwamaxabiso eMonero (XMR): Julayi 04
Xa iinkunzi zeenkomo zonyusa umfutho wazo, inqanaba lokumelana ne-244 yeedola linokwaphulwa, elinokunyusa ixabiso liye kuthi ga kwi-281 ne-322 yeedola. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 244 liphethe, amaxabiso anokuhla aye kwinqanaba lenkxaso le- $ 189, $ 161 kunye ne- $ 136 amanqanaba.
UMonero uhambahamba kwitshathi yemihla ngemihla. Ukuhamba kwe-bearish kukhokelele ekuhambeni okungafaniyo ngenxa yesantya esibuthathaka se-bearish kunye noxinzelelo lwe-bullish. Ukuzama okwenziwe ziinkunzi ukuphula inqanaba lama- $ 244 kuyasilela njengoko indibano kwinqanaba elikhankanyiweyo lomelele. Ngaphandle kokuba kukho ukonakala kwenqanaba lenkxaso le- $ 189, ukudityaniswa kuyaqhubeka.
Itshathi yemihla ngemihla yeXMRUSD, julayi 04
Ixabiso leMonero lithengisa ngezantsi kwaye ngaphakathi kwamaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lokudityaniswa kokuqina. Xa iinkunzi zeenkomo zonyusa umfutho wazo, inqanaba lokumelana ne-244 yeedola linokwaphulwa, elinokunyusa ixabiso liye kuthi ga kwi-281 ne-322 yeedola. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 244 liphethe, amaxabiso anokuhla aye kwinqanaba lenkxaso le- $ 189, $ 161 kunye ne- $ 136 amanqanaba.
I-Monero kukuhamba okujikelezayo kwitshathi yeeyure ezi-4. Uxinzelelo lwabathengisi luya buthathaka kwaye alunakho ukwahlula inqanaba lenkxaso le- $ 189. Ixabiso liboshwe ngaphakathi kwinqanaba lokumelana ne- $ 244 kunye ne- $ 189 yenqanaba lokuxhasa.
Itshathi yeXMRUSD 4 yeyure, ngoJulayi 04